China Decyl Dimethylamine, CAS No. 1120-24-7DMA10 mveliso kunye nabenzi | Imichiza yaseKerui
Inombolo ye-CAS engu-1120-24-7
Igama lorhwebo: DMA10
I-Decyl dimethylamine (DMA10) yeyona nto iphambili ekrwada yokuvelisa ityiwa ye-cationic quaternary ammonium, enokuthi isonjululwe nge-benzyl chloride ukuvelisa i-benzyl quaternary ammonium yetyuwa 1027;
I-Decyl dimethylamine (i-DMA10) inokuphendula ngezinto ezingafunekiyo ezinje nge-methyl chloride, i-dimethyl sulfate, kunye ne-diethyl sulfate ukwenza i-cationic quaternary ammonium salt;
I-Decyl dimethylamine (DMA10) inokuphinda isonjululwe nge-sodium chloroacetate ukuvelisa i-amphoteric surfactant betaine;
I-Decyl dimethylamine (DMA10) iphendula nge-hydrogen peroxide ukuvelisa i-amine oxide njengearhente enegwebu;
Ixabiso le-amine ephezulu I-KOH / g
Amine yamabanga aphantsi /%
I-Decyl dimethylamine (DMA10) Igcwele kwigubu lensimbi eli-160 kg / umphanda; zigcinwe ngaphakathi kwindawo epholileyo kunye nenomoya, ekhuselweyo kubumanzi kunye nokuvezwa lilanga. Ixesha lokugcina liinyanga ezili-12.
I-Decyl dimethylamine (DMA10) yimichiza yokuhlanganiswa kwezinto eziphakathi. Nceda uphephe ukudibana namehlo kunye nolusu ngexesha lokusebenzisa. Ukuba kukho unxibelelwano, nceda uhlambe ngamanzi amaninzi ngexesha kwaye ulithumele kugqirha ukuze afumane unyango.